"Kukhona umoya isiRashiya, it inuka ..." - lezi imigqa adumile "lolwandle Lwalugobile" Pushkin ofanelekayo singakwazi ubheke umsebenzi womunye umuntu, lonke izwe lenkaba okhazinyulisiwe - Viktora Mihaylovicha Vasnetsova. Yena - ukuziqhenya art Russian, wezakhiwo futhi umculi-folklorist omsebenzi wakhe ogxile ethandwa, uneqiniso futhi abanamakhono kakhulu.
Kusukela esikhathini eside esidlule
Cishe zonke imidwebo Viktora Vasnetsova waphendukela endulo. Emidwebweni yakhe savuka esidlule Russia lasendulo. Izinganekwane futhi inganekwane by umcabango acacile ethandwa, utshelwa umculi ukudala ngakho wasithanda "Alyonushka" futhi "Ivan Tsarevich", agijima ngokusebenzisa sehlozi ngomngane wakhe omuhle - Mpunga Wolf. Cishe ngesikhathi nobuqhawe kumiswa the ubukhulu Kiev, ukuxabana internecine futhi bahlushwa Polovtsy usitshele lezi zithombe Viktora Vasnetsova, njengoba "Knight ngaleso Crossroads" futhi "Ngemva Battle of Prince Igor." Umlando bezwe Russian nokubekezela abantu bayo, ecebile + ngakho futhi umphefumulo ukuphana, ngezigxobo osinda kangaka, eyayembuleka phambi kwamehlo ethu, njengoba uma ingxubevange - kubalulekile ukuba zisuke ngendwangu kwenye. Umdwebi wajoyina indlela yokuqala emsebenzini izisusa zomlando, ezingaqondakali futhi amaqhawe zangempela, ekubeni ungumdali uhlobo zabo in umdwebo. Lokhu kufakazelwa imidwebo Viktora Vasnetsova: "Yilwani Dobrynya nge iNyoka", "Warriors Apocalypse" kanye nabanye abaningi.
Umculi ephilayo "yemvelo"
Kodwa akukho umnikelo zincane ekuthuthukiseni komfundi bytopisatelstvom. Ukuhlakulela Umbono OnjengokaKristu Ngobukhulu ngobulula, okusezingeni eliphezulu futhi ezivamile, zemikhosi futhi ezivamile, kwansuku ngokulinganayo wasithatha mculi. Lokhu kufakazelwa Umdwebo Viktora Vasnetsova kusukela "peredvizhnicheskogo" isikhathi. intombazane ongumlimi uhamba endleleni enyinyekile ijoka, iqembu rebyatni emzaneni eduze kwesihlahla, abagembuli inveterate, overstayers kuze kuse olufunwa, ukuyothenga izindawo zokudlala kanye ezitolo Novgorod ndawo, umsindo futhi naphezu komsindo wesixuku - konke ezithakazelisayo futhi eduze umculi, konke eyamdonsela emhlabeni ebona izinkondlo of "ukuphila kwangempela" wokuphila kazwelonke. Futhi izethameli, ukujwayelana umsebenzi wakhe, futhi, uba umgwaqo, lesi sici elula esingokwemvelo sokuphila kwansuku zonke. Ngenxa yokudweba Vasnetsov Victor Mikhailovich ogxile ethandwa nesihawu, Russian ngempela ngomoya essence.
Futhi kwakuyini umculi ngokwakhe? Ukuze sithole impendulo, ake sibheke self-portrait yakhe. Yebo, inkosi ibanga zokudala ubanzi kangangokuba seliye wadala eningi imisebenzi kule uhlobo. Kusukela umdwebo Vasnetsova Viktora Mihaylovicha ( "Self-Portrait", 1873) ubuka kithi ayisekho insizwa nge amehlo Akumangalisi ohlakaniphile futhi lunomusa. Izacile ubuso gaunt nakakhulu futhi elusizi yayenza umuntu, kodwa okumangalisayo soulful, ikukhonzile. izici Ngokucophelela, nobhebhenene lwentshebe nezinwele ezinde, futhi ngaphezu kwakho konke, kuyisibonakaliso sothando nokuqonda, ububele emehlweni umuntu Kwesimo bebambisana noJesu Kristu, noma Prince Myshkin kusuka inoveli Dostoevsky sika. "Kuyinto awusiwo owaleli zwe", emi phezulu nezilingo impahla, umzabalazo izinzuzo namalungelo ngokuphelele wazinikela ukuba isevisi yobuciko ezweni, Vasnetsov futhi eqinisweni lifana lezi zidalwa. Nokuzwelana - zangaphakathi nezangaphandle - kwaphawuleka ngokukhethekile lapho uqhathanisa lokhu ngomsebenzi nezinye lombhali, eyabhalwa okuyinhloko ezahlukene. Portrait of Vasnetsov ibhulashi N. D. Kuznetsova ikhombisa umculi egqoke izingubo zakhe zokusebenza, nge Iphalethi kanye ibhulashi esandleni. Lokho kungenxa yokuthi - kusukela isimo kwansuku ekungafini - ahamba yena.
Eminingi yale midwebo umculi Victor Vasnetsov ukuphakamisa lolu daba usizi nokuhlupheka kazwelonke. On ngendwangu "ukusuka efulethini efulethini" sibona ayisekho abasha umbhangqwana oshadile, baphoqeleka ukuba bathuthe bakhishwa emizini yabo. Kuwufanele okuseduzane ku edabukisayo, sibalo owayesekhokhoba, futhi inhliziyo ingena inothi ukudabuka okujulile nozwela ngobuqotho. Kuyacaca ukuthi abantu abampofu asizuli bebodwa manje icebound Petersburg chibi. Cishe, basuke baxoshwa ngenxa yokungakhokhi yomnikazi, futhi manje ukhathele futhi eqandisiwe, angazi ukuthi enzeni lapho ubuso nabangenasihawu umbuso autocratic, indoda nomfazi ngokudabukisayo azulazule ngomgwaqo. Ngo zikuthwale ngezandla ubambe amayunithi nge izinto zabo abampofu. Motif yesizungu, ukungahlaliseki abangenamakhaya lwaqiniswa yokuthi phezu kwaleli chibi awusekho ongashadile. seagull kuphela flying esibhakabhakeni olumhlophe, kodwa inja enolaka libonisa amazinyo akhe izihambi amazinyo. Ngangifuna ukuthi ucezu lwami umdwebi - Nakanjani. Motifs Democratic igcwale nezinye imidwebo Viktora Vasnetsova, amagama lapho sebekujwayele.
Hhayi njalo inkosi, ngahamba ngayosebenza ngokushesha kuletha indalo yakhe kuze kube sekupheleni. Kwaphela iminyaka eminingi, wabhala: "Onegin," Pushkin. Izikhathi ezine remade "Impi Nokuthula" UTolstoy. Kunezibonelo ezifanayo uyazi nokudweba. Izigaba abasebenze abadumile yakhe "Alenka" Vasnetsov. Ekuqaleni, ngo-1880, wabhala landscape ihlathi: izihlahla anamandla, isihlahla esingaweleki nechibi anomhlanga ne dark, emanzini ajulile. Ngemva konyaka kwaba sidle lyric sibalo wentombazanyana, ethambile ngakho futhi ukuzivikela isizinda imvelo ezinzima. Umbhali wafuna ngokucacile ukwenza izilaleli wabazwela Heroine yesithombe. Alenushka nothando - ngokusuka enhliziyweni futhi ngayo yonke inhliziyo yakho.
Smiling isithombe Levitan "Birch Grove"
Indlela ukudweba Pegasus? isinyathelo Umhlahlandlela
Udweba kanjani ama-orchid? Ibonisa i samuntu lula nokuba yinkimbinkimbi
Umculi Young Nadezhda Rusheva: Biography, lokusungula, inkumbulo,
Industrial Ubuciko: definition nomlando omfushane
Holiday Inn Sharjah 5 (UAE / Sharjah)
Ikhoneni elihle kakhulu emhlabeni - iBalos Bay (eKrethe)
Iyatholakala uma thina iqiniso elimsulwa?
"Aescinat L-lysine": yokusetshenziswa futhi impendulo
Umculo for the dance lomshado - indlela ukukhetha?
Inkukhu e Aerogrill: iresiphi elula
Indlela yokudweba i-portrait esiteji ngesinyathelo sabalingisi: amathiphu namasu
Fusafungine umuntu ngemithi elwa namagciwane: ukuthi kuyini, indlela ukusebenzisa futhi lapho ekhona
Umkhaya Vacations ERussia
Indlela ukupheka iklabishi imiqulu in multivariate? Isidlo sendabuko ngendlela entsha
Kungani i-lily iphendula amaqabunga aphuzi?